PressReader - Isolezwe: 2018-04-16 - Uzoqhulula bukhoma amanoni eNewcastle
Uzoqhulula bukhoma amanoni eNewcastle
Isolezwe - 2018-04-16 - IMIBONO - BONGIWE ZUMA
SIZOQHULULA amanoni aso okokuqala eNewcastle isilomo somculo wokholo esishisa izikhotha ngezingoma ezigcwele isingisi.
UDr Tumi wodumo lwengoma ethi, Nothing Without You uzobe ecula bukhoma amahora amahlanu elandelana ePotter House, eMathukuza kusukela ngehora lesikhombisa ngo-Epreli 28 emcimbini ohlelwa abeTauworld Events.
Abagqugquzeli bomcimbi bathi babone igebe eliphakathi kwabanye abaculi noDr Tumi njengoba bezama ukuletha abantu abakhulu kule ndawo.
UFika Selepe weTauworld Events uthe bazoqinisekisa ukuthi bamnikeza isikhathi esanele njengoba eyindlala kule ndawo.
“Inhloso enkulu yokwenza umcimbi ofana nalo ukuthuthukisa indawo yangakithi ngoba abantu bababukela kude abaculi abadumile. UDr Tumi sibonile ukuthi abantu bayamthanda futhi akakaze amenyelwe imcimbi kule ndawo. Simtholile, savumelana nangezinhlelo zomcimbi,” kusho uSelepe.
Eqhubeka uthe, imvamisa bayabamema nabaculi bendawo ukuzondlalela emcimbini yabo kodwa kulokhu akekho ozobangisana noDr Tumi.
“Umculi omatasa futhi ongatholakali kalula, njengoba ezobe ecula bukhoma akumele kube khona okuzomphazamisa. Kodwa sizoqhubeka nokuhlela eminye imicimbi ezokwazi ukunikeza nabanye abaculi abasafufusa ithuba lokucula nabantu abaziwayo,” kusho uSelepe.
Ephetha uthe, kubantu abazoya emcimbini bakulindele ukuthi kuzoba khona nekhefu phakathi nendawo ukuze akhokhe amandla uDr Tumi njengoba ziziningi izingoma azozicula bukhoma. Amathikithi omcimbi aseqalile ukutholakala kule ndawo ngoR120 kuya kuR200.